Ha na-eji otu efere emepụta cheesi Arduino UNO | Akụrụngwa n'efu
Ndị na-ebi akwụkwọ 3D
Ha na-eji otu efere emepụta cheesi Arduino UNO
E nwere ọtụtụ ụdị nke cheesi nke ejiri ihe ngwaike eji ewu ihe. Ebumnuche nke ọtụtụ ndị egwuregwu chess bụ iji wuo cheesi eletriki nke mmadụ nwere ike igwu megide igwe ma ọ bụ naanị ka a zọpụta mmegharị ha ma zipụ ya na kọmputa.
Na nke a anyị nwere igwe yiri ya nwere ike na-egwu cheesi na pụrụ ọbụna ịkpali iberibe maka anyị, ma ihe ijuanya na ngwaike ya anaghị adị ike, ọ chọrọ naanị efere Arduino UNO.
A efere nke Arduino UNO ọ bụ efere dị ọnụ maka ọtụtụ mana ọ naghị enwekwa ike ọ bụrụ na anyị ejiri ya tụnyere mbadamba ndị ọzọ dị ka Arduino MEGA ma ọ bụ Raspberry Pi. Tinyere ojiji nke mbadamba a, RoboAvatar, onye okike nke oru a, ejirila usoro XYZ, otu ihe eji eme ihe na 3D na-ebi akwụkwọ.
Ihe atumatu a gha enyere ya aka site na igwe nke magnetized nke gha enyere igwe aka ichota ihe etinye ya. Na mgbakwunye na Arduino UNO na ihe owuwu ahụ, RoboAvatar ejirila Shield Shield na otu MCP23017 I / O na-agbasawanye. Na mgbakwunye, onye okike echepụtala mmemme Python nke na-enyere aka ịrụ akụrụngwa niile na nsonazụ egwuregwu Chess.
Ọ dabara nke ọma na ọrụ a bụ n'efu ma nwee ike wulite n'oge ọ bụla. Maka nke a, anyị ga-enweta ihe owuwu ihe ma wuo ya dịka usoro nke iwu ụlọ na RoboAvatar biputere na Nkuzi. Na ebe anyi nwere ike inweta ngwanro niile di nkpa iji mee ka oru ngo a.
Ihe oru a nke chess bu ihe na-enye obi uto, mana o naghi akwusi bụrụ ihe ngwọta dị oke ọnụ maka mmemme chess kọmputa. Ọ bụ ezie na echiche nke iji efere Arduino UNO Maka ụdị ọrụ a ọ dị ka ihe na-atọ ụtọ ma ọbụnadị ọ ga-ekwe omume iwulite igwe obibi 3D jiri ụdị efere a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Ha na-eji otu efere emepụta cheesi Arduino UNO
Ultimaker ga-elekwasị anya na mmepe ngwanrọ maka mbipụta 3D
Wulite Nwa nke Kachasị Elu nke withwa na Rasberi Pi na Ọtụtụ Nwepụta
Nyocha EnglishNwalee Catalanajụjụ gbasara spanish